That's so good, right?: အပြုံးလေး (စတုတ္ထပိုင်း)
ကျွန်တော့်စကားမဆုံသေးခင်မှာပဲ သူကျွန်တော့်ကိုဆွဲနမ်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းနှင့်သူ့ နှုတ်ခမ်းတို့ ထိတွေ့လိုက်သည့်အခါ တီကောင်ကို ဆားဖြင့်တို့လိုက်သလိုတွန့်သွားမိပြီး ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်း တိန်းတိန်းဖြစ်သွားမိသည်။ သူ့အနမ်းလေးက ပူနွေး စိုစွတ်ကာသူ့နှုတ်ခမ်းလေးကလည်း ပိုကတ္တီပါစလေးလို နူးညံလွန်းနေသည်။ ကျွန်တော်ယောင်ရမ်း ပြီး မျက်လုံးကိုပိတ်ထားလိုက် မိသည်။ သူ့ ရဲ့အနမ်းထဲတွင် နစ်မွန်းပျော်ဝင်နေရင်း ကျွန်တော်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကို မေ့ချင်ချင်ဖြစ်သွားသည်။ သူ့အနမ်းက ချိုမြိန်ပါသည်။ ကျွန်တော့်လျှာထဲတွင် စွဲမက်စွာသူ့နှုတ်ခမ်းသားတေနွှင့် ထိတွေ့ သည်ကို အရသာတွေ့လာရသည်။
ထို့နောက်ကျွန်တော်သူ့ ကို ကုတင်ပေါ်သို့လှဲချလိုက်ကာ အပေါ်မှတက်ခွလိုက်ပြီးအငမ်းမရနမ်းရှိုက်မိလိုက်သည်။ သူ့ရဲ့နွေးနေသော လျှာလေးကျွန်တော့်ခံတွင်းထဲဝင်လာချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်သလိုယစ်မူးထုံရီေ၀၀ါးသွားသည်။ အနမ်းသီချင်းတစ်ပဒု၏ဆွဲခေါ်ရာကို ကျွန်တော်တို့နှစ်ရောက် ရူးသွပ်စွာ ကခုန်ရင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စိုက်ြကည့်နေလိုက် မိသည်။ ထို့နောက်သူ့နှုတ်ခမ်းနှင့်ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းကို ခွာ လိုက်သည်။ စေးကပ်နေသော နှုတ်ခမ်းသားတွေက ပန်းပွင့်လေး တစ်ခု အလွှာခြင်းခွာလိုက်သလို ကွဲကွာ သွား၏။ ထို့နောက် ကျွန်တော်သူ့နား နားသို့ တိုးတိုးလေးကပ်ပြောလိုက်သည်။
သူ့ဆီမှ ကျွန်တော့်အတွက် လွင့်ပြန်လာသည်က အပြုံးလေးတစ်ပွင့်ပါပင်။ သူ့အပြုံးထဲတွင် ချိုမြိန်သည့်သကာရည်တွေ ရောစပ်ထား သည့်အလား ကျွန်တော့်ရင်ကို ချိုမြသွားစေသည်။ ကျွန်တော့်သူ့ ပါးလေးကို မရဲတရဲဖြင့် အသာအယာကိုင်ြကည့်လိုက်သည်။ ချောမွတ် နေသောသူ့ပါးပြင်လေးကို ကျွန်တော်ထိရမှာ တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ြဖစ်နေမိသည်။ တုန်ရီနေသော ကျွန်တော်လက်တွေကို သူဖမ်းဆုပ် လိုက်၏။ ထို့နောက်သူ့ပါးပြင်နားသို့ ကပ်ပေးလိုက်လေသည်။
ကျွန်တော် ပိုးပါဝါစလေးလိုနူး ညံနေသည့် သူ့ပါးပြင်လေးကို ပွတ်သပ်ြကည့်မိသည်။ ကျွန်တော့်လက်တွေကိုတော့ သူကဆက်လက်ဆုပ် ကိုင် ထားဆဲပင်။
”ဆရာလေး ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်က ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ ဟုတ်လား ဆရာလေး”
ချစ်သူတွေတဲ့။ သည်အသုံးအနှုန်းကြီး ကြားလိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတစ်မျိုးကြီး ဖြစ်သွားသည်။ ယောက်ျားလေးချင်း ချစ်သူတွေဟု သတ်မှတ်ရမှာ ကျွန်တော်ဝန်လေးနေသည်များလား။ ကျွန်တော် သတ္တိနည်းပြီး သူရဲဘောကြောင်နေသည်လား သို့မဟုတ် မရင့်ကျက် သေးသည့် စိတ်ကြောင့်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသည့် အခြေအနေပေါ် လက်သိပ်မခံနိုင်သေးသည့်စိတ်ကြောင့်လားတော့မသိပါ။ ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင် တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်နေသလို စူးရှရြှကီးကြောင့်ကြစိတ်ဝင်နေမိသည်။
”ဖြေပါဦး ဆရာလေးရယ်……ကျွန်တော်တို့က ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လား”
”ဟုတ်တယ် အခုမင်းနဲ့ ငါနဲ့က ချစ်သူတြွေဖစ်သွားပြီ။ ငါ………. ငါ……….လေ ငါ့ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲကွာ။ ရင်ဘတ်အောင့် သလိုလို ဗိုက်ပဲဆာသလိုလို ၀မ်းပဲပူသလိုလိုနဲ့။ ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကြီးတစ်ခါမှ မခံစားဖူးဘူး။ မင်းရောဘယ်လိုနေလဲ"
”ကျွန်တော်က ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော…့ ………”
ကျွန်တော်မေးတော့ သူပြုံးပြန်သည်။ လတ်တလောသြူပုံးလို့ချည်းသာ နေသည်မှာ အခေါက်ပေါင်းမရေနိုင်တော့။ ထို့နောက်သူ့ လက်တစ်ဖက်က ဘယ်ဖက်ရင်အုံကို ပုတ်ပြသည်။
”ဒီရင်ဘတ်ြကီးထဲမှာလေ ဒိတဒ်ိတ်………ဒိတဒ်ိတ်နဲ့ ဆရာလေးရယ်။ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ ဒီလောက်ကျယ်နေတာ ဆရာလေးမကြားရဘူးလား”
ကျွန်တော်သူ့ ရင်ဘတ်နားသို့ ကပ်ပြီးနားထောင်ြကည့်သည်။ ဟုတ်ပါရဲ့……….။သူတော်တော်လေးကို ရင်ခုန်နေသည်ပဲ။ ကျွန်တော် လည်း ခြေတွေလက်တွေတုန်ချင်သလိုဖြစ်နေသည်။ ဘ၀မှာတစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကို ပထမဦးဆုံးစတင်ခံစားလိုက် ရသည့်အချိန်မှာ တော့ သူရောကျွန်တော်ရော အချစ်ရဲ့အောက်တွင် ဒူးတွေထောက်ြပီး လက်မြှော က်အရှုံးပေးကာ အချစ်ပြုသမျှ နုရတော့မည့် မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်လေးတွေ ဖြစ်နေချေပြီလေ။ ကျွန်တော်ယြုံကည်ရူးမိုက်စွာ ကိုးကွယ်မိနေသည့် အချစ်က ကျွန်တော့်အတွက် ယခုလို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသည့် ရလဒ် တွေကို ဖန်တီးမွေးဖွားပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့် ခဲ့ဖူးပါချေ။
”ဆရာလေး မနောက်နဲဗျာ..။ ကဲပြော…………ကျွန်တော့်ကို ချစ်ရဲ့လား”
”ဘာဖြစ်လို့ ချစ်တာလဲ ဆိုတော့။ မင်းရဲ့အပြုံးလေးကြောင့်ပေါ့ကွာ ။ မင်းလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တိုင်း ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ဘယ်လောက် လှုပ်ခတ်သွားလဲသိလား။ မင်းရဲ့ အပြုံးထဲမှာကိုယ့်အသည်းနှလုံးပါသွားတယ်။ ကိုယ်မင်းကို ပထမဦးဆုးံ စတွေ့တဲ့နေကပဲ မင်းကို စချစ်ခဲ့တာ။ မင်းသိပ်တော်တယ် သိလား။ ကျောက်တုံးလို မာကျောနေတဲ့ကိုယ့်အသည်း အချစ်ဆိုတာဘာမှန်းမသိတဲ့ကိုယ့်အသည်း တံခါးမပွင့်သေးတဲ့ ကိုယ့်အသည်း သော့ပိုင်ရှင်ပျောက်နေတဲ့ကိုယ့်အသည်း မင်းလေးနဲ့တွေ့ မှပဲ အရာရာကို သိနားလည်လာခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကိုယ့်ဘ၀ကြီးကသိပ်ကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသွားပြီပေါ့ကွာ ”
ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့ သူသဘောကျပြီး ရယ်နေသည်။ ကျွန်တော်ပြောတာရယ်စရာကောင်းနေလို့ လားမသိပါ။ ထို့နောက် သူကျွန်တော့်ကို ကုတင်ပေါ်သို့ လှဲချလိုက်ြပီးကျွန်တော့်ဗိုက်သားပြင်ပေါ်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ်ခေါင်းအံုး အိပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် သူ့ခေါင်းလေးကို ယုယစွာ ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်။ သူ့ဆံစတွေက နူးညံစွာ ပျော့အိနေသည်။
”ကျွန်တော်လည်း အတူတူပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ လေ ဆရာလေးကို ခိုးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတောင်ရှိသေးတယ်။ ဆရာလေး ကျွန်တော့်ကို ပစ်မသွားပါနဲ့ဗျာနော်။ ဆရာလေးပစ်သွားရင်လေ ကျွန်တော်ရင်ကြွဲပီး ကျန်ခဲ့မှာဗျ သိလား။ ကျွန်တော်လေ ဆရာလေးကို သိပ်ချစ်တယ်ဗျာ အရမ်းချစ်တယ် တအားကြီးချစ်တယ်။ ဆရာလေးကြောင့် ကျွန်တော်တော့ရူးတော့မှာပဲဗျာ”
”မင်းကို ကတိပေးတယ် ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်မင်းကို ဘယ်တော့မှခဲမွ သွားဘူး။ အိုကေလား”
”ဆရာလေး ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ်လို့ပြောဦးဗျာ။ ကြားချင်သေးတယ်”
”ဟားဟား ချစ်ပါတယ်ကွာ ချစ်ပါတယ် ချစ်တယ် ချစ်တယ် သိပ်ချစ်တယ် အများကြီးချစ်တယ် မိုးလောက်ကြီးချစ်တယ် အကြီးကြီးချစ်တယ်"
ကျွန်တော်ပြောရင်းဆိုရင်းဖြင့် သူ့ပါးလေးကိုငုံ့နမ်းလိုက်ပါသည်။ သူ့ပါးလေးက ဖောင်းအိနေလျှက် ဆွဲညှစ်ချင်စရာကောင်းလှသည်။ သိပ်ပြီးချစ်စရာကောင်းသည့် သူ့ကိုအခုမှပဲ ကျွန်တော်တစ်ဝကြီးချစ်ခွင့်ရတော့သည်။ ကျွန်တော၏့် အနာဂတ်ြကီးသည် သာယာ အေးမြလျှက်အချစ်ပန်းတွေဝေေ၀ဆာနေတော့မည်။ ကျွန်တော့်ဘ၀ကြီး က သူ့အတွက်လိုရာဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဖန်ဆင်းထားသလို ဖြစ်နေစေရမည်။ ကျွန်တော်နဲ့ပက်သက်ြပီး သူနည်းနည်းလေးမှ စိတ်မဆင်းရဲ့စေရ အောင်ကျွန်တြော်ကိုးစားမည်။ သူ့ အတွက် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့အချစ်တွေ အကုန်လုးံ ပုံလို့ပေးအပ်လိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်သူ့ ကို သိပ်ချစ်ပါသည်။
သူကျွန်တော့်ကို မြော့ကည့်ရင်း သူ့လက်ပေါ်သို့ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် ကျွန်တော့်လက်တွေပေါ်သို့ထပ်မံအုပ်မိုးဆုပ်ကိုင် လိုက်ပါသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော့်လက်တွေကို သူ့လက်ချောင်း လေးတွေဖြင့်ဖြေးဖြေးလေး ညှစ်ကာ သူ့ နှုတ်ခမ်းဖြင့်ကပ်ကာ နမ်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ကြည်နူးရိပ်တွေတမြညြ့်မည့် မျှင်းတက်လာပြီး လှိုက်ဖိုနေသော လျှို့ဝှက်သည်းဖိုရင်ခုန်သံတွေနှင့်အတူ ပြုံးပျော်နေမိ သည်။ သူလည်းကျွန်တော့်ကို တော်တော်ချစ်သည်ပဲ။
”သိပ်ချစ်တယ် သိပ်ချစ်တယ် သိပ်ချစ်တယ် သိပ်ချစ်တယ်ဗျာ…………………..”
ချစ်သြူဖစ်ခါစ ချစ်နလန်ထခါစ သူနှင့်ကျွန်တော်သည် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ကြည်နူးမဆုံးနိုင်ြဖစ်နေရင်း အချိန်တွေကုန်မှန်းမသိ ကုန်သွားသည်။ နေ့လည်အချိန်မှသည်ညအချိန်သို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်သွားသည်။ နေလုံးကြီးသည်လည်း အနောက်ဂေါ်ယာကျွန်း သို့ စုန်းစုန်းမြုပ်ပျောက်ကွယ် သွားချေပြီ။ တိမ်တိုက်ညိုညိုတြွေကားထဲတွင် ခမ်းကွေးကွေးလခြမ်းလေးပင်ခပ်ရေးရေးပေါ်နေပြီဖစ်သည်။ ညအချိန်ဝင်ခါစ ဆိုပေမယ့် အိုက်စပ်စပ်တော့ နိုင်နေသေးသည်။
ကျွန်တော် ၀ရံတာပေါ်မှ အပြင်ဖက်သို့ ငေးနေမိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တဒုန်းဒုန်းမောင်းနှင်သွားသောထွေလာဂျီအသံများက ပတ်ဝန်းကျင် ကို အသက်ဝင်လှုပ်ရှားနေစေသည်။အခုထိအိမ်မပြန်သေးသော ကျွန်တော့်ကို အမေစိတ်ပူနေပြီလားမသိပါ။ ကျွန်တော် တွေဝေလွင့် မျောစွာစဉ်းစားနေမိပါသည်။ ခဏကြာတော့ ဆိုင်ကယ်လေတစ်စီးခြံဝန်းလေးထဲသို့ ၀င်လာသည်။ သြူပန်လာပြီထင်သည်။ ညစာသွား ၀ယ်မည်ဟုဆိုကာ အပြင်ထွက်သွားသည်မှာနာရီဝက်ခန့် ရှိနေပြီဖစ်သည် ယခုမှပြန်ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော်အောက်ထပ်သို့ ဆင်းသွားပြီးသူ့လက်ထဲမှ အထုတ်တွေကို ကူဆွဲပေးလိုက်သည်။
”ဆရာလေး ဒီညအိမ်မပြန်ရဘူးနော် ဆရာလေးအမေကို ဖုန်းဆက်လိုက် ပြန်မလာတော့ဘူးလို့။ကျွန်တော့်အဖေလည်း အလုပ်တွေ များနေတာ အိမ်ပြန်နောက်ကျလိမ့်မယ်။အိမ်မှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ မနေချင်ဘူး”
”အိုကေ ဒါဆိုရင်ခဏနေကျရင် ဆက်လိုက်မယ်လေ။ နေပါဦး အခုက ဘာတွေဝယ်လာတာလဲ။ အထုပ်တွေကလည်းမနည်းပါလား”
”မြေအိုးမြီးရှည်လေ။ ပြီးတော့ ၀က်သားခေါက်ကင်ရယ်။ ကြက်ခြေထောက်သုပ်ရယ်၊ သောက်ဖို့ chives တွေရယ်ဝယ်လာတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ဟင်းတွေရှိသေးတယ်။”
”ကဲပါ ဆရာလေးရယ် အိမ်ထဲကိုဝင်ရအောင်ပါ။ အိမ်ထဲရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရင်းစားကြတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား”
”အဟင်း လိမ္မာ တယ် ဒါမှငါ့မိန်းမ …………..လာသွားမယ်”
သူနှင့်ကျွန်တော် အထုတ်တွေဆွဲရင်း အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးမ ဖြတ်သန်းကာ ထမင်းစားခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။ ထမင်းစားခန်းထဲ သို့ရောက်သော် စားစရာတွေကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ပန်းကန်ုတြွေဖင့်လှယ်ထဲ့လိုက်၏။ မြေအိုးမြီးရှည်တွေက ပူပူလောင်လောင်ြဖင့် အငွေ့ တွေတထောင်းထောင်း ထနေသည်။ ငရုတ်ကောင်းခတ်ထားသောကြောင့် လားမသိတော်တော်လေးကိုမွှေးနေသည်။ ကျွန်တော်ဗိုက်တွေ တကြုတ်ြကုတ်ဆာလာသည်။
”ဆရာလေး ရော့ အ၀သာဆ…ွဲ ……”
သူ့ကျွန်တော့်ရှေ့ကို မြီးရှည်ပန်းကန်ြကီး ချပေးသည်။ ထို့နောက် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ထဲမှတူတစ်ချောင်းကို ထုတ်ကာပေး၏။
”ကျေးဇူးပဲ ……..မင်းလည်းစားလေကွာ ”
”ကျွန်တော်ဗိုက်သိပ်မဆာသေးဘူး။ စားချင်စိတ်လည်းသိပ် မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုခံနေသလိုပဲ နေရထိုင်ရခက်နေတယ်”
”ရင်ြပည့် ရင်ကယ် ဖြစ်နေတာများလား။ ဒီနေ့တစ်ခြားဘာတွေ စားထားသေးလဲ"
”မဟုတ်ဘူး ဆရာလေး အဲလိုဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး အခုဖြစ်နေတာက ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာကြီးဖြစ်နေသလို တစ်ခုခုပဲလိုနေသလို မတင်မကျကြီးဗျ”
ကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်သည်။ သူလည်းကျွန်တော့်လို ဖြစ်နေတာဖြစ်မည်။ အင်းလေ နှစ်ယောက်လုံးက အချစ်ဦးတွေဆိုတော့ သည်လောက်တော့ရှိမည်ပေါ့။ အချစ်ဆိုတာအခုမှ စတင်ခံစားဖူးတဲ့ သူတွေဆိုတော့ အချစ်ရဲ့ထူးဆန်းမှုတွေကို တအံ့တသြဖြစ်နေ တာဖြစ်မည်။
”ပြုံးချင်လို့ ပြုံးတာကွာ ”
”အသေသတ်လိုက် မပြောဘူး ”
”ဟာ………..ညစ်ပြီ ကြည့်စမ်း ”
”ဟား………… ဟား………………. ဟား ”
အစားအသောက်တွေက တော်တော်စားလို့ကောင်းသည်။ စားလိုက်သောက်လိုက်သောအခါဗိုက်တင်းပြီး နေရထိုင်ရခက်ချင်သလိုပင် ဖြစ်လာသည်။ စားလို့သောက်လို့ ပြီးသွားသောအခါချွေးတြွေပန် လာသည်။ မြီးရှည်က စပ်ကလည်းစပ် ပူကလည်းပူဆိုတော့ လူတစ်ကိုယ်လံုးအပူထုတ်ထားသလို ဖြစ်လာသည်။ ဇင်မင်းသူက ပန်းကန်တွေသိမ်းပြီး ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ကာ ပြုံးစိစိလုပ်နေသည်။
”ဆရာလေး ကျွန်တော့်အခန်း ထဲသွားနေလေ အဒဲီ့မှာ အဲယားကွန်းဖွင့်ထားတယ်။ ကျွန်တော်ပန်းကန်တွေ သိမ်းပြီးတာနဲ့ တက်လာ ခဲ့မယ်။ Chivas ပုလင်းတွေပါတစ်ခါထဲ ယူသွားလိုက်”
ကျွန်တော် သူ့ ကို တစ်ချက်ြကည့်လိုက်ြပီး စားပွဲပေါ်ရှိ Chivas ပုလင်းတွေကိုကိုင်ကာ အပေါ်ထပ်သို့တက်လာခဲ့သည်။ အခန်းထဲ ရောက်မှ လေးအေးပေးစက်ကြောင့် ချွေးနည်းနည်းတိတ်သွားသည်။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ဟြိုကည့်သည်ြကည့် ကြည့်နေရင်း မျက်လုံးတွေက အမှတ်မထင်အပြင်ဖက်သို့ ကြည့်လိုက်မိသည်။ အပြင်ဖက်တွင် မဲမှောင်နေပြီး မိုးစုံးစုံးချုပ်နေချေပြီ။
ကျွန်တော်အိမ်ကိုသတိရကာ အမေ့ထံ ဖုန်းဆက်ရန်ပြင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲတွင် ဖုန်းကိုရှာ ကြည့်သည်။ မတွေ့။ ကျွန်တော်အခုမှ သတိရသည်။ ဖုန်းကအိမ်မှာ ကျန်ခဲ့သည်ပဲ။ အခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်ရင်း ကုတင်ခေါင်းရင်းရှိ တယ်လီဖုန်းကိုတွေ့သည်။ ဖုန်းဘေးနားသို့ လျှောက်သွားကာ နံပါတ်တွေကို သွက်လက်စွာ နှိပ်လိုက်ရင်းအမေ့ဆီဖုန်းခေါ်လိုက်၏။
”သား……..အခုထိပြန်မလာသေးဘူးလား မိုးချုပ်နေပြီ။ နင့်ကိုအမေဖုန်းဆက်သေးတယ်ဖုန်းကနင့်အခန်းထဲက ထမြည်မှ အိမ်မှာ ဖုန်းကျန်ခဲ့မှန်းသိတာ။ အခုဘယ်ရောက်နေတာလ”ဲ
”သြော် ဟုတ်လား။ ပြန်မလာတော့ဘူးလား သားရယ်။ ဒီမှာ အမေက ထမင်းစားမလို့စောင့်နေတာ”
”………… ………… ……………… ……………..”
”အေးအေး ပြီးတာပါပဲ ဒါဆိုရင်လည်း အမေစိတ်မပူတော့ပါဘူး။ သူများအိမ်မှာ ဆိုတော့အနေအထိုင်ကျဉ်းကျပ်နေမှာ ပဲစိုးတယ်။”
”………….. ………………. ……………….. …………..”
”အေးအေး ဒါဆို ဒါပဲနော်သား ……”
ကျွန်တော့်ဖုန်းခွက်ကို ချပြီး သက်ပြင်းခပ်ဖွဖွလေး ချမိသည်။ အမေ့ကို သနားတော့သနားသည်။ အခုလိုကျတော့ တစ်ယောက်ထဲ ပစ်ထားသလိုများဖြစ်နေမလား မသိပါ။ အမေတစ်ခုသားတစ်ခု ဘ၀မို့အမေ့နှင့်ကျွန်တော်က သာမန်သားအမိတွေထက် ပိုပြီး ချစ်ကြသည်။ အမေကလည်း ကျွန်တော့်အပေါ်မိခင်ဝတ္တရားမပျက်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်ကလေးမှ မျက်နှာ အညိုးမခံပါ။ ကျွန်တော့်ကို အမြဲတမ်းအရိပ်တကြညြ့်ကည့်ရှိနေခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ဘာတွေလိုအပ်နေသည် ဘာလုပ်ချင်နေ သည်ကို အမေက ပြောစရာမလိုပဲ အကုန်သိသည်။ အမြဲတမ်းလိုလိုလဲအချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမေ့ကို ကျွန်တော် ချစ်ကြောက်ရိုသေသည်။
”ဒေါက် …………ဒေါက…် …………..ဒေါက…် ………ဆရာလေး တံခါးဖွင့်ပါဦး ”
တံခါးခေါက်သြံကားရသဖြင့် ကျွန်တော်ကုတင်ပေါ်မှ ထကာ တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက် ပြီးရုတ်တရက်ြမင်လိုက် ရသညြ့်မင်ကွင်းကြောင့် ကျွန်တော်ကျက်သေသေသွားသည်။
”ဇင်မင်းသူ……….အီ ………..အ…ီ ….င်္အကျီလဲဝတ်မထားပါလား”
”ဟုတ်တယ် အရမ်းပူလို့ အောက်ထပ်မှာ ချွတ်ထားခဲ့ပြီ။ ပန်းကန်တွေသိမ်းရတာနဲ့ချွေးတွေတောင်ပြန်တယ် ဟူး ………”
သူပြောပြောဆိုဆြိုဖင့် ကျွန်တော့်ကို ကျော်ကာ အခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ ပိန်ပိန်ပါးပါးသူ့ ခန္ဓာ ကိုယ်လေးက တောင့်တောင့် တင်းတင်းတော့ရှိပါသေးသည်။ ဒါပေမယ့်နံရိုးနှစ်ခုကတော့ ပုခုံးနောက်ကို နည်းနည်းထွက်နေသည်။ ခါးသေးပြီး ဗိုက်မှာ ပြားကပ်ကပ်ဖြင့် နို့သီးလေးမှာ နီရဲနေသည်။ ခါးပတ်အထက်တွင် အနည်းငယ်စွန်းထွက်နေသော သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီစလေးကို ကြည့်လိုက်ရင်း ကျွန်တော်တစ်ချက်ြပုံးလိုက်မိသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ ဇင်မင်းသူရေ့။
”ဆရာလေး Chivas သောက်ရအောင် လာလေဗျာ။ ခဏနေရင် စလောင်းက မန်ယူပွဲလာလိမ့်မယ်အတူတူ ကြည့်ရင်းမော့ရအောင်”
ကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုပဲ သူ့ အနားသို့ သွားထိုင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေ သမင်ပျိုလေး တစ်ကောင်လို တက်ြကွ နေသည်။ သူအသက်တစ်ချက်ရှုလိုက်တိုင်း ထွက်ပေါ်လာသည့်ညှင်းသဲ့သဲ့လေတိုးသံလေးကို နားထောင်လိုက်တိုင်းျွန်တော်ရင်ထဲတွင် ယားကျိယားကျိဖြစ်လာသည်။ သူ့၏ချောမွတ်နေသော ကျောပြင်လေးကို ကြည့်ရင်း ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ် ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာ ပြန်သည်။ သူကတော့ ဘာမှမဖြစ်သလို အေးအေးဆေးဆေးဖြင့်တီဗွီဖွင့်ကာ Chivas ပုလင်းလေးကိုမော့ပြီး လိုင်းတွေတစ်လိုင်းပြီး တစ်လိုင်း ချိန်းနေသည်။
သူကျွန်တော့်ကို ဂရုမပြုသည်လား သို့ မဟုတ် တမင်ဟန်ဆောင်နေသည်လား။ ကျွန်တော် စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသော အထုတ်ထဲမှ Chivas တစ်လုံးကို ထုတ်ကာကိုင်ြကည့်လိုက်သည်။ Chivas ပုလင်းလေးသည် ရေခဲစိမ်ထားသောကြောင့် အေးစက်နေပြီး ရေစက်လေး တွေ ပုလင်းတွင် တွဲသီနေလေသည်။ ကျွန်တော် သူ့ပုခုံးနောက်သို့ သွားထိုင်လိုက်ကာ Chivas ပုလင်းလေကို ကိုင်ပြီး မခို့တရို့ပြုံးလိုက် မိသည်။ ထို့နောက် အေးစက်နေသော Chivas ပုလင်းဖြင့် ချောမွတ်နေသော သူ့ကျောပြင်ကို အသာဖြေးဖြးချင်း ကပ်ြကည့်လိုက်သည်။
သူကျောကော့သွားသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်ဖက်သို့လှည့်ကာ ထူးဆန်းသော မျက်နှာ ဖြင့်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်သူ့ ကို အရှေ့ ဖက်သို့ ပြန်လှည့်စေလိုက်သည်။ ထို့နောက် အေးစက်နေသောပုလင်းဖြင့် ထပ်ပြီးကပ်လိုက်ြပီး ပုခုံးတစ်လျှောက် အသာဖြေးဖြေးချင်း အောက်ပိုင်းသို့ပွတ်တိုက်လျှောဆင်း လိုက်သည်။
”အာ…………….အား……………အာ…့ ……..ဆ……ဆရာ………ဆရာလေး…….အေး ……….အေးတယ်ဗျ။ ဟိဟိ။ ယားကျိ ယားကျိ အေးစက်စက်နဲ့။ မနေတတ်တော့ဘူးဗျာ။ အာ…………….အာ့…………”
”ဟား ……….ဟား………….အရူးလေးရဲ့ ငြိမ်ြငိမ်နေ မင်း ကိုနတ်ြပည်ပို့ပေးမလို့”
အေးစက်နေသော ခ့ငလျေ ပုလင်းလေးမှ ရေစက်ရေဥလေးတွေက သူ့ပုခုံးတစ်လျှေက် လျှောကနဲဆင်းသွားပြီး ဘောင်းဘီအစပ်သို့ ရောက်သွားကာ အထဲသို့ ဆက်လက်စီးဝင်သွားသည်။ဘယ်နေရာထိ စီးသွားသည်တော့ မမြင်ရတော့ပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်နေသောပုလင်းကို ဖယ်လိုက်ကာ ရေတွေစိုစွတ်နေသော သူ့ကျောကို အသာအယာလက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ြကည့်သည်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲတွင် ဗုံအလုးံ တစ်ထောင်လောက် တီးနေသလိုတတုန်တုန်ြဖင့် မြည်ခတ်နေလေသည်။ ကျွန်တော့် အာခေါင်တွေ ခြောက်လာချင် သလိုလိုဖြစ်လာသည်။ သူ့ ကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ြကည့်ရင်းမှ နှုတ်ခမ်းဖြင့် ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်မိသည်။ သူဝုန်းကနဲ့ ထခုန်သည်။
”ဆရာလေး မကောင်းဘူးဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲ။ မနေတတ်တော့ဘူး။စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ ယားကျိ ယားကျိနဲ့။ ဟိဟိ”
မတ်တတ်ြကီးဖြစ်နေသော သူ့ကို ကျွန်တော်မြော့ကည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက်မည်သည့်စကားတစ်ခွန်းမှ မဆိုပဲ သူ့ကို လက်မှဆြွဲပီး ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲသို့ ဆွဲထည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူ့ဆံပင်စတွေကို နမ်းရှိုက်မိလိုက်သည်။ သူကျွန်တော့်ကို မြော့ကည့်လာသည်။ သူ့မျက်နှာ ကကျေနပ်နေသည့် အရိပ်အယောင်တွေ အပြည့်ဖြစ်နေသည်။ သြူပုံးစိစိ လုပ်နေကာ မည်သည့်စကားမှ မဆိုတော့ပါ။ ထို့ နောက် သူကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှ ထွက်ကာ ကျွန်တော့်ကို ကုတင်ပေါ်သို့လဲချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူကျွန်တော့်အပေါ်မှ ၀မ်းလျား မှောက် တက်ခွကာ မျက်နှာ ကကျွန်တော့်ရင်ဘတ်နားသို့ ကပ်လာပြီး ကျွန်တော့်င်္အကျြီကယ်သီးတွေကို တစ်ခုချင်းဖြုတ်နေသည်။
ကျွန်တော်သူ့ကို ခေါင်းထောင်ပြီး ကြည့်လိုက်မိသည်။ သူကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြသည် ထိုအပြုံးထဲတွင်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ြကား အသိစိတ်နှစ်ခုက တစ်စုံတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန်ညှိနိ်ှုင်းတိုင်ပင်လိုက်သည်ဟု ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် ခံစားရသည်။
င်္အကျီတွေ ချွတ်ပြီးသွားသောအခါ သူကျွန်တော့် ဘောင်းဘီကို ချွတ်ဖို့ ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီ ခါးပတ်ခေါင်း ကို ကိုင်ကာ သူအကြာကြီးတွေဝေနေသည်။ သူ့လက်လေးတွေကမထိရဲထိရြဲဖင့် ကျွန်တော့် ခါးပတ်နားတွင် တုန်ချိတုန်ချိ လုပ်နေသည်။ ကျွန်တော်သူ့လက်တွေကို ဖယ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီခါးပတ်ခေါင်းကို ဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်ကာ ဇစ်ကိုဆွဲလိုက်သည်။ ထို့နောက်ဘောင်းဘီကို ပေါင်တစ်ဝက်လောက်ထိလျှောချပေးလိုက်၏။ ကျန်သည့်အပိုင်းက သူ့ဖာသာသူဆက်လုပ်စေရန်ထားလိုက်သည်။ သူကကျွန်တော့်ကို ဘာလို့အကုန်မချွတ်တာလဲ ဟူသောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်က မင်းဖာသာမင်းချွတ်ဟူသော အကြည့်ဖြင့်ပြန်ြကည့်လိုက် သည်။
သူတစ်ချက်ပြုံးကာ ကျွန်တော်ဘောင်းဘီကို ခြေထောက်မှကျွတ်အောင် ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူ့ဘောင်းဘီကိုလည်း ကဗျာကရာ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ယခုတော့ သူရောကျွန်တော်ရော အတွင်းခံလေးတွေနှင့်ဖြစ်သွားသည်။ သူ့ကျွန်တော်ဗိုက်ပေါ်ခွထားရင်းမှ ၀မ်း လျားမှော က်ချလိုက်သည်။ ကျွန်တော်ရင်ထဲအေးစက်သွားသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမနိုင်ြဖစ်လာကာ မရိုးမရွဖြစ်လာ သည။် ပူနွေးနေသည့် သူ၏ဗိုက်သားပြင်နှင့် ကျွန်တော့်၏ဗိုက်သားပြင်က ထိကပ်နေပြီး အသက်ရှုလိုက်တိုင်း အထက်အောက်ပိန် လိုက်ပြားလိုက် ထိနေကာ နူးညံ့သည့်အထိတွေ့ တစ်ခုကိုခံစားနေရသည်။ သူကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းရှိုက်လိုက်ပြီး တဖြေး ဖြေးအောက်သို့ လျှောဆင်းသွားသည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းနားသို့ ရောက်သောအခါ သူရပ်တန့်သွားသည်။ ကျွန်တော် မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်၏ ။
ခဏကြာသောအခါ စိုစိစိုစိ လျှာကလေး၏အထိအတွေ့က ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော် တွန့် မသွား အောင် မနည်းသိထားရသည်။ သူလျှာဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုဆက်ညှင်းဆဲနေသောအခါ ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ပဲ ရယ်ချင်စိတ် ပေါက်လာသည်။
”ဟိဟိဟ…ိ ………ဟေ့ကောင် ယားတယ်ကွ အာ…့ ………အာ့……အိုး …………ဟား…………ဟား………….”
ကျွန်တော်သူ့ ခေါင်းကို ကိုင်ကာ မော့ယူလိုက်သည်။ သူကတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်နေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို ကျွန်တော့်အပေါ်မှ တွန်းချလိုက်ပြီး သူ့အပေါ်မှ ခွကာ ထပ်လှဲ လိုက်သည်။
သူ့လက်တွေကို ကျွန်တော့်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ြပီး ကုတင်ပေါ်သို့ ဆဲဆွ န့်လိုက်သည်။ သူ့ခြေထောက်တွေကို ကျွန်တော် ခြေထောက်တွေဖြင့် လိမ်လိုက်ပြီး ကျစ်နေအောင် ဖိထားလိုက်သည်။ ကျွန်တော်သူ့ အပေါ်ထပ်မှော က်လိုက်မှ ကျွန်တော့် တို့နှစ် ယောက်ြကား သတိထားစရာတစ်ခုကပေါ်လာပြန်သည်။ အခြားတော့မဟုတ် သူ့ချက်အောက်ပိုင်းနှင့်ကျွန်တော့်ချက်အောက်ပိုင်းတို့ ထိကပ်နေသည့် အောက်နားတွင်း ပူနွေးမာကျောနေသောပစ္စည်းနှစ်ခုထိတွေ့ မှုကို သတိပြုမိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ရောသူရော ထိုနေရာသို့ပြိုင်တြူကည့်လိုက်မိကာ ကိုယ်စီပြုံးလိုက်မိသည်။ သူ့လက်တွေက ဆုပ်ကိုင်ထားသည့် ကျွန်တော့် လက်ကို ဖယ်ကာ ထိုနေရာသို့ ထိကိုင်ရန် တဖြေးဖြေးလှမ်း လာသည်။ ကျွန်တော်သူ့လက်တွေကိုပြန်ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်။
သူကျွန်တော့်ကို ကြည့်လာသောအခါ ကျွန်တော်သူ့ကို မထိရဘူး ဟူသောအကြညြ့်ဖင့် ပြုံးစိစိလုပ်ကာ ခေါင်းရမ်းပြလိုက၏် ။
ကျွန်တော့် အမူအရာကို မြင်သောအခါ သူသွားပေါ်အောင်ြပုံးလာသည်။ ပူနွေးနေသော ထိုနွေးတေးတေးနေရာကြီးက ကျွန်တော့်ကို ခံစားမှု အရှိန်မြင့်တက်လာစေပြီးအသည်းတွေအူတွေယားလာစေသည်။ ကျွန်တော် ထိုနှစ်နေရာကို ပွတ်သပ်မှုအကြိမ်ြကိမ်ပြုလုပ် ကြည့်သော အခါ သူမျက်လုံးလေးမှိတ်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ကျွန်တော် ကျန်ရှိနေသေးသည့် သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူရောကျွန်တော်ရော တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ယြုံကည်မှု အပြည့်အ၀ဖြငြ့်ကည့်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော်သူ့လက်တွေကို ကိုင်ကာ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ပျားရည်လိုချိုမြသောအချစ်ဝတ်ရည်ခရီးကြီးတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ြကသည်။ သာယာချိုမြိန်သော၊နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော၊ စူးရှရှ ရမ္မက်ဆန်ဆန် ရင်ခုန်သံတွေနှင့်အတူအကြင်နာနှင်းဆီရနံ့သင်းနေသည့် အချစ်ရေယဉ်ကြောကြီး ထဲတွင်မြောပါရင်း မောဟိုက် လာသည့်အခါတစ်ဦးကို တစ်ဦးယုယအနမ်းတွေဖြင့် နမ်းရှိုက်ရင်း အမောဖြေလိုက်နားလိုက် ခရီးဆက်လိုက်ဖြင့်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ခြဲ့ကသည်။
ခရီးဆုံးသွားသောအခါသူရောကျွန်တော်ရော မောဟိုက်ပင်ပန်းကာ ချွေးတွေရွှဲစိုနေသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလွတ်ထွက်သွားမလား စိုးရိမ်ကာ တင်းကြပ်စွာဖက်ထားပြီး တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်မ၀ဖြစ်နေရသည်။ နွမ်းလျနေသောသူ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဆွေးမြေ့နေသည့် ထင်းတုန်းကြီးကို မီးရှို့ နေရသလို စိုထိုင်းထိုင်းဖြင့် မှုန်မှိုင်းနေမိသည်။ သူ့လက်ကလေးတွေကိုလည်း နမ်းရှိုက်နေမိသည့်အကြိမ်အရေတွက်က မရည်နိုင်တော့။ နူးအိအိ သူ့အသားလေးနှင့် ကျွန်တော့်အသားလေးထိနေရသည်က ပဲလောက၏အကြီး မားဆုံးသော စည်းစိမ်ြကီးတစ်ခုကို ခံစားနေရသလို ကျွန်တော့်အတွက် ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာကောင်းနေသည်။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲတွင်သူ့မျက်နှာ လေးကို ဖွက်ထားပြီး ငြိမ်သက်နေသည်။ ကျွန်တော် သူ့ ကျောပြင်တွေကို ပွတ်သပ်ပေးရင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ခက်သဲ့သဲ့တိုးညှင်းစွာ ညည်းဆိုနေလိုက်သည်။ သူ့နဖူးလေးကို နမ်းလိုက် သူ့ဆံပင်လေးကို နမ်းလိုက်ဖြင့် ညသည် အဓိပ္ပါယ်ြပည့်ဝစွာ လမင်းကြီးနှင့်အတူသာယာလှပနေလေသည်။
အပြင်ဖက်တွင် ကာရန်မဲ့ လိပ်ြပာငယ်လေး၏ မူးမိုက်နေသည့် ရင်ခုန်သံတွေလို စိမ့်စိမ့်လေးတိုက်ခတ်နေသည့် ညလေပြေလေးသည် အေးမြလျှက်လောကကြီးတစ်ခုကို အမောပြေအောင်ဆော်ဝေ့တိုက်ခတ်လျှက်ရှိသည်။ နို့ ရည်ဆမ်းထားသည့် လောကကြီးသည်လည်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းအနုပညာမြောက်စွာ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတစ်ပဒ်ုလို ကမ္ဘာ ကြီးကို အလွမ်းနာကျအောင်ပြုစားနေသည်။အရာအားလုးံ သည် ပြီးဆုံးခြင်း ကျေနပ်ြခင်း အာဝသီတြွေဖင့် ငွေမှုံရည်ကျအောင်ရွှဲနစ်နေသော နှလုံးခုန်သံတွေ အောက်တွင် မှုန်ဝါးပျောက်ကွယ် ကုန်ြကသည်။
အချစ်ရဲ့ ကန့်သတ်ထားသည့် နယ်မြေတစ်ခုမှ သူနှင့်ကျွန်တော် စည်းကျော်ခြဲ့ကပြီးနောက် နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယြုံကည်စွာ ဖြင့် ဘ၀ချင်းပုံအပ်လိုက်ြကသည်။ အမှားတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့်မှန်သည့်ဟုလည်း ယူဆ၍မရသော ဤရမ္မက်ယဉ်ကျောကြီး ထဲတွင် သူရောကျွန်တော်ရော စိတ်ရှိလက်ရှိလက်ပစ်ကူးခြဲ့ကပေပြီ။ ထောင်သောင်းမကသော ကြယ်ကလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီး ရှက်စနိုးဖြင့် သရော်ကုန်ြကသည်။ အချစ်နဲ့လောက အဘိဓမ္မာကြားက သိမ်မွေ့ခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ မိုက်မဲစွာ ရိုက်ချိုးမိလိုက်ြကပြီ။ သိက္ခာ တရားတွေ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေ ခ၀ါချလျှော်ဖွတ်ြပီးနောက် အနောက်ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတန်းစဉ်လာ တွေလို ရင်ခုန်စရာကောင်းသည့်အချစ်စစ်ပွဲတစ်ခုကို မီးမောင်း ထိုးတိုက်ပဲဝွ င်ခဲ့ချေပြီ။ ယနေ့သည်သူနှင့်ကျွန်တော် ချစ်သြူဖစ် သည့်နေ့လည်း ဟုတ်သလို နှစ်ဦးနှစ်ယောက်၏ ပထမဦးဆုံးသော ပန်းပွင့်တွေကို မြေပေါ်သို့ချွေချခဲ့သည့်နေ့ဆိုလျှင့်လည်းမမှားပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကြွေကျခဲ့ပါပြီ……………………….။
မနက်မိုးလင်းသည့်အခါ အနမ်းတစ်ခြုဖင့်သူ့ကို နှုတ်ဆက်ခြဲ့ပီး ကျွန်တြော်ပန်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် အိမ်မက်မှ လန့် ပြီးနိုးထလာသူ တစ်ယောက်လို ဝေး၀ါးစွာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ချင်နေသေး သည်။ အဖြစ်ပျက်တွေ၏ လျှင်ြမန်စွာ ပြောင်းလဲမှု အောက်တွင်မယြုံကည်နိုင်ဖွယ်ရာ အခြေအနေတွေကို ရုတ်ချည်းဆိုသလို ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ဘ၀ကြီးသည် အချစ်နဲ့ ပက်သက်ြပီး လှိုင်းမသင့် မုန်တိုင်းမမိခဲ့ဖူးပါ။ တစ်စုံတစ်ရာသောချစ်ြခင်းသင်္ကတတွေက အခုတော့ ကျွန်တော့်ကို ချော့မြူပြီး သူလိုရာသို့ ညို့ငင်ဆွဲေ ခ်ါသွားလေသည်။
ကျွန်တော် မိန်းမောစွာ မျောပါသွားမိသည်။ ပွင့်သစ်စလောက ကြီးကြိုကည့်ရင်းကျွန်တော် တစ်ချက် တွေးမိသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ချစ်သူရှိနေပြီ။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်သည့်အခါ မျက်နှာ သစ်လိုက်ြပီး အမေပြင်ပေးသည့် မနက်စာကို မြိန်ရည်ယှက်ရည်စားသောက်လိုက်သည်။ ထို့ နောက် အ၀တ်စားလဲကာ အဆောင်သို့ထွက်လာခဲ့သည်။သူနှင့်တွေ့ရပေဦးမည်။ ကျွန်တော် မျက်နှာ တော့ နည်းနည်းပူချင်နေသည်။ ရှေ့ဆက်ြပီး ရင်ဆိုင်ရမည့်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်၏ ဘ၀ကကြိုးသစ်တွေက မည်သို့မည်ပုံလာဦးမည် မသိပါ။ လူတွေသည်အချစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးတော်တော် ဒုက္ခများကြသည်။ ဤအချစ်ဆိုသော အရာကြီးသာမရှိလျှင်လူသားတွေ ကမ္ဘာ ကြီးပေါ်တွင် ဆက်လက်အသက် ရှင်နေထိုင်နိုင်ပါတော့မည်လား မသိပါ။ အချစ်ကလူတွေကို အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစေနိုင့်သည့် မှော်ဆရာလေးတစ်ဦးလိုပါပင်။ အချစ်တွင် ပင်ကိုယ်သိန္ဓိနှင့်စွမ်းအားတွေရှိနေသည်။ အချစ်၏တန်ဖိုးသည် မြင်ြမတ်နေပြီး အချစ်ကို နှလုံးသားဆိုသော နေရာတစ်ခုမှလွဲ၍ အခြား မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရှာ တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်လိမ့်။
အချစ်သည်အရာအားလုံးနှင့် ရောယှက်နေခြင်းမရှိပဲ သည်းသန့်ရပ်တည်နေသောသန့်ရှင်းစင်ြကယ်သည့် လောကအလှရတနာ တစ်ပါးဖြစ်သည်။ အချစ်သည်သာ အရာအားလုံး၏အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ လူတွေအားလံုး အချစ်၏ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ခစားကာ အရှုံးပေးရစမြဲဖစ်သည်။အချစ်သည် အရာအားလုံးကို ပိုင်စိုးနိုင်သလို အမျိုးမျိုးခြယ်လှယ်နိုင်ပြီး စေလိုရာညွှန်းနိုင်လေသည်။ လူတွေ အားလုံးအချစ်၏ အမိန့် တော်အတိုင်း အချစ်၏ညွှန်း ကြားချက်အတိုင်း တသွေမတိမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်သည်။ အချစ်ကြောင့်ပဲ ကမ္ဘာ ကြီးက သာယာလှပလာသလိုရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်သည့် အခါလည်းရှိသည်။
ကျွန်တော့်၏နေ့စွဲတိုင်းတွင်လည်း ယခုဆိုလျှင် အချစ်က ပါဝင်ပက်သက်တော့မည် ဖြစ်သည်။
ဇင်းမင်းသူတို့ အိမ်တွင် Guide လုပ်မည့်ကိစ္စ အမေ့ကိုပြောပြသောအခါအမေက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူဖြင့်သာ ခွငြ့်ပုပေးခဲ့သည်။ ဤသည် ကပဲ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို အမြဲတမ်းအတူရှိနေစေဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလို ဖြစ်သည်။ သူနှင့်ကျွန်တော် စားအတူသွားအတူ အိပ်အတူ ဖြင့် နေ့ရက်တွေကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့သည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတွေ့ရလျှင်မနေနိုင်လောက်အောင်အချစ်ြကိုးတွေက တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့သည်။
သူနှင့်ကျွန်တြော့်ကားတွင်ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆက်သွယ်မှုလေးတွေလဲ ရှိနေပါသေးသည်။ သူကတစ်ခါတစ်ခါ ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲတွင် “ဒီနေ့ ဆရာလေး ကျွန်တော့်ကို ဘာလို့အရမ်းကြည့်တာလဲ” ဟူသည့် စာမျိုးလေးတွေ။ “ ဆရာလေးဒီနေ့ ၀တ်လာတဲ့ င်္အကျီလေးကဆရာလေးနဲ့လိုက်တယ် ” ဟူသည့် စာမျိုးလေးတွေ လာရေးထားတတ်သည်။ ထိုသို့ သူ၏ထူးဆန်းသည့် အမူအကျင့်လေးတွေကို မြင်ရသောအခါ ကျွန်တော် အြံသ၀မ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သူနှင့်ကျွန်တော်နှင့် နေ့ရက်လေးတွေသည် ပျော်ရွှင်ခြင်း ကြည်နူးခြင်း အချစ်ရဲ့အနှစ်အရသာတွေပြည့်စုံ လျှက်ဘ၀ကြီးသည် သာယာ နာပျော်ဖွယ်အတိပြီးနေလေသည်။မတွေ့ဖြစ်သည့်အခါများတွင် ညအိပ်ချိန်ရောက်သော အခါဖုန်းတွေတစ်ဝကြီးပြောဖြစ်ြကသည်။ ဖုန်း ပြောလျှင်လည်း အနည်း ဆုံး တစ်နာရီခန့်ကြာမြင့်တတ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ချစ်သူဘ၀လေးသည် သက်တန်းတစ်လ ကြာမြင့်ခဲ့လေသည်ငြွေခည်ရောင်ဖျော့နေသည့် မြစ်ပြင်ကျယ်ြကီးသည် အဝေးမြှကည့်နေသူအဖို့ စိတ်နှလုံးကိုဦးညွတ်သွားလောက် အောင်လှပနေသည်။ နေလုံးကြီးသည်လည်း ရောင်နီပျိုးကာ မြစ်ြပင်ြကီးထဲသို့နစ်ြမုပ်လုနီးနေပြီဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကောင်းကင် ယံတွင် လှုပ်ရှားပြန်သန်းနေသောငှက်ကလေးများ၏ ကျီကျီကျာကျာ မြည်သံကိုလည်း ကြားနေရသည်။ ဤကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ခုသော လွမ်းမောဖွယ်ရာရှုခင်းကြီးတွေကို မြင်ရတိုင်းကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင်အမြဲတမ်းကသိကအောက်ြဖစ်မိသည်။
ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေသည်ကမြို့အစွန်ရှိတောင်ကုန်း ဘုရားပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ စေတီငှက်ြမတ်နားတော်မှ ထွက်ပေါ်လာသော ဆည်းလည်းသံလေးများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးဝှေ့ရိုက်ခတ်လျှက် လေညှင်းနှင့်အတူဆြော့မူးနေလေသည်။တောင်ကုန်းပေါ်မှနေ၍ အောက်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်လျှင် မြူမှုံအနည်းငယ် ရီဝေနေသောခပ်ကျဲကျဲလူနေအိမ်တစ်ချို့နှင့် စမ်းညို့နေသည့် လယ်ကွင်းပြင် ကြီးတွေကို စပ်ဆက်လျှက်တွေ့မြင်နေရသည်။ တောင်ထိပ်ကို ရောက်နေသဖြင့် တစ်ခါတစ်ခါတိုက်ခတ်လာသောလေပြင်းပြင်းတစ်ချို့က ဘုရားပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကို ၀င်ရောက်မွှေနောက်သွားပြီး ဆိတ်ြငိမ်မှုကိုတစ်ခဏတာမျှ ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။ ညနေခင်းအလှသည် အလွန်လွမ်းမောဖွယ်ရာကောင်းလွန်းသည်။
ကျွန်တော် သည်လိုညနေခင်း မျိုးကို နည်းနည်းမှ မကြည့်ချင်ပါ။ ကျွန်တော်ညနေခင်းတွေကို မုန်းသည်သို့ပေမယ့် ဇင်မင်းသူ၏ အလိုဆန္ဒအရ သည်နေရာကိုကျွန်တော် လိုက်လာခြဲ့ခင်းဖြစ်သည်။ Romantic ဆန်သည့် ကျွန်တော့်ချစ်သူက Sunset ကြည့်ချင်သည် တဲ့လေ။ သည်တော့ ကျွန်တော်လိုက်လျောရမည်ပေါ့။ သူ့အတွက်ဆိုလျှင် ကျွန်တော် ဘာမဆိုအဆင်သင့်ဖြစ်နေရမည်။ သူလိုအပ်တာ မှန်သမျှ ကျွန်တြော်ဖည့်ဆည်းနိုင်ရမည်။ ကျွန်တော်သည် သူ့အတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှဆုတောင်းလိုက်ရုံနှင့်ရနိုင်သည့် မှော်ဝင် နတ်သားတစ်ဦးဖြစ်နေရမည်။ နောက်ဆုံးသူကျွန်တော့်ရင်ကိုခွဲပြီးကျွန်တော့်အသည်းကို လိုချင်တယ်ဆိုလျှင်တောင် သူပင်ပန်းမှာ စိုးလို့ ကျွန်တော်ကိုတိုင် ဓားနဲ့ခြွဲပီးထုတ်ပေးလိုက်မည်။ အဲ့သည်လောက်ထိအောင်သူနှင့်ပက်သက်ြပီး အရာရာကို ဆုံးရှုံအနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်ဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
”ဆရာလေး Sunset အ ကြည့်ရတာ မိုက်တယ်ဗျာ။ ဒီလိုနေရာမျိုးတွေ သိနေရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ကျွန်တော့်ကို အစောကြီးခေါ် မလာတာလဲ။ ကျွန်တောဒ်ီနေရာလေးကိုချစ်တယ်”
ငါက ညနေခင်းတွေကိုမုန်းတယ်လေ အဲ့ဒီတော့ Sunset ကြည့်ရတာကိုလည်း မကြိုက်ဘူး ။အဲ့ဒီဝင်ခါနီးနေလုံးနီနြီကီးကို ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုကျရှုံးတော့မလိုခံစားရတယ်။ နောက်ြပီး တော့ အဒဲ့ါနေမင်းကြီးရဲ့ တစ်နေ့တာနောက်ဆုံးချိန်လေ။ သူ့ရဲ့ သေဆုံးခါနီး ဘ၀ ကြီးကိုမြင်တွေ့ရတာ ငါစိတ်မချမ်းသာဘူး။”
”ဆရာလေးက တော်တော်ထူး ဆန်းတာပဲ ကျွန်တော်ကတော့ ညနေခင်းတစ်ခုရဲ့အလှနဲ့ နေမင်းကြီးရဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် နှုတ်ဆက်ချိန်ကို သဘောကျတယ်။ ဒီအချိန်လေးက လောဘဒေါသတြွေငိမ်းအေးပြီး စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ ပြီးတော့ Sunset ကရလာတဲ့ feelings တွေကလည်း ဘာနဲ့ မှလဲလို့မရဘူး။ အရမ်းသစ်တယ်"
ကျွန်တော်သူ့ စကားကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သူ့ကိုကျွန်တော် ကျော်တက်ကာ ရှေ့ လေးငါးလှမ်း လောက်တွင် ရပ်တန့်လိုက်သည်။ သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကျောခိုင်းထားသည်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေက ကျွန်တော်မုန်းသည့် ညနေခင်းနေကိုစူးစူးရဲရြဲကီးကြည့်နေမိသည်။
”ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခံစားချက်ချင်းမတူညီတာလို့ ပြောလို့ရတယ် ဇင်မင်းသူရဲ့။ထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဒူးရင်းသီး ဘယ်လောက်အနဲ့ပြင်းပြင်း ကြိုက်တဲ့သူက ကြိုက်တာပဲမကြိုက်တဲ့သူကျတော့ လုံးဝအနံ့ တောင်မခံနိုင်ဘူးလေ။ ကြိုက်ချင်းနဲ့ မကြိုက်ချင်းကြားမှာ မ တစ်လုံးပဲ ခြားတယ်ဆိုပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အများကြီး ကွာ သွားတယ်။”
”အင်း………..ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုတော့ ဒီနေရာလေးကိုမကြာမကြာလိုက်ပို့ ပါဗျာနော်။ ဆရာလေးမပါရင်ကျွန်တော် အိမ်ကထွက်လို့မလွယ်ဘူးဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား။ အဖေက ကျွန်တော့်ကို နည်းနည်းမှ အလွတ်ပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး ”
ကျွန်တော်သူ့ စကားကို မတုန့် ပြန်ပဲခဏလောက်နေလိုက်သည်။ တိုက်နေသော လေကြောင့် ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေ လေတွင် တလွင့်လွင့်လှုပ်ခတ်နေလေသည်။ ကြေးနီရောင်နေရောင်ကလည်း ကျွန်တော့်မျက်နှာ ပေါ်တွင် ဖြာဆင်းနေပြီး ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလံုး နီမြန်းနေသည်။
”လာတာတော့ လာမှာပေါ့ ဇင်မင်းသူရယ် ဒါပေမယ့် မင်းကဆယ်တန်းကျောင်းသားလေစာတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ လာလို့မရဘူးပေါ့ အဆင်ပြေမယ်အခါကျရင်ငါမင်းကိုခေါ်လာပါ့မယ်”
ကျွန်တောဆ့်ီသို့ မည်သည့်စကားမှ သြူပန်မပြောပါ။ သူလည်းကျွန်တော့်လိုပဲ ခေတ္တလောကကြီးကိုငေးကြည့်နေသည်လားမသိပါ။ သို့ပေမယ့်ကျွန်တော်သူ့ကို လှည့်မကြည့်မိပါ။ငွေရောင်တလက်လက် လင်းနေသည့် မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကိုသာ ငေးကြည့်နေလိုက်သည်။ မြစ်ြကီးသည်လင်းမြွေတစ်ကောင်ပမာ ကွေ့ ကောက်နေပြီး အဝေးရှိမှုန်ပြပြ တောင်ြကားတွေထဲသို့စီးဝင်သွားသည်ကို တွေ့ ရသည်။ မယာများသည့် လောကကြီးသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်တော့သန့်ရှင်းစင်ကျယ်နေတတ်သေးသည်ပါလား။ ထို့အတူ ကောက်ကျစ် တတ်သည့် ကြံကမ္မာ သည်လည်းသဘာဝတစ်ရားကြီး၏ လှပမှုအောက်တွင် ငုတ်လျှိုးပျောက်ကွယ်နေတတ်သည်။ သူ့ဆီမှ အတန်ြကာ သည်အထိ မည်သည့်စကားသံမျှ ထွက်ပေါ်လာသောအခါ ကျွန်တော်နောက်သို့လှညြ့်ကည်လိုက်မိသည်။ ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသည့် မြင်ကွင်းက ကျွန်တော့်ကိုခေါင်းနပန်းကြီးသွားစေ ပြီးထိန့်လန့်ခြောက်ြခားသွားစေသည်။
”ဇင်မင်းသူ …………………ဇင်မင်းသူ …………….ဘာဖြစ်တာလ”ဲ
မြေကြီးပေါ်တွင် မေ့လဲနေသော သူ့ကို ကျွန်တော်အပြေးသွားထူလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်စိးု ရိမ်မှုတွေငယ်ထိပ်သို့ရောက်လာသည်။ သူ့ကိုကျွန်တော့် ပွေ့ထူလိုက်ြပီး သူ့ပါးလေးကိုအသာလှုပ်ခတ်ြကည့်လိုက်သည်။
”ဇင်မင်းသူ ကိုယ်ပြောတာကြားရလား ဘာဖြစ်သွားတာလ…ဲ ………….”
သူ့မျက်တောင်လေးတွေ ပြန်လှုပ်ခတ်လာသည်။ ထို့နောက် တဖြည်းဖြည်းချင်း မျက်လုံးလေးပွင့်လာသည်။ စိုးရိမ်နေသော ကျွန်တော့် မျက်နှာကို မြင်သောအခါ သြူပုံးလာသည်။ သူ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရမှ ကျွန်တော့်ရင်ထဲအပူလုံးကြီးကျသွားတော့သည်။
”ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဇင်မင်း သူ မူးလဲသွားတာလား။ မင်း ညက အိပ်ရေးမ၀ဘူးလား။ ဒီနေ့မင်းကိုကြည့်ရတာ သိပ်ြပီးမလန်းသလိုပဲ။ မျက်နှာ လည်း ဖြူဖတ်ဖြူလျော်နဲ့”
”အင်း ………..ကျွန်တော်ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ခေါင်းထဲမှာ မိုက်ကနဲဖြ
”ဒီကနေပြန်ရင် ငါတို့ဆေးခန်းကို ၀င်ရအောင်နော်။ ဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ရအောင်”သူရယ်ပါသည်။ သူရယ်လိုက်သောအခါ ပါးပြင်မှ ပါးချိုင့်လေးက ခွက်ဝင်သွားသည်။
”ဒီလောက်သေးသေးမွှားမွှားရောဂါလေးကို ဆရာဝန်တွေဘာတွေသွားပြနေရင်လူရယ်စရာဖြစ်နေမှာ ပေါ့ ဆရာလေးရယ်။ ကျွန်တော် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဟုတ်ပြီလား”
”ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နော် ဇင်မင်းသူ။ မင်းကိုငါ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှ အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး ”
”ဟာ……….နမိတ်မရှိ နမာမရှိတာတွေ မင်းကဘာဖြစ်လို့သေရမှာ လဲ။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေမပြောစမ်းနဲ့ကွာ ။ ”
”ဟုတ်တယ် အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ မစနဲ့။ ငါမကြိုက်ဘူး။ မင်းသိလား မင်းပြောလိုက်တဲ့ စကားကငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိ တုန်လှုပ်ခြောက်ြခားသွားစေတယ် ထင်သလဲ။ မင်းနဲ့ပက်သက်တာမှန်သမျှသေးသေးလေးပဲ ဖြစ်ြဖစ် အကြီးကြီးပဲ ဖြစ်ြဖစ် ငါအတွက် အကုန်လုံးလေးနက်တဲ့အရာတွေချည်းပဲ။ မင်းကို ငါဘယ်လောက်ချစ်တယ် ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ မင်းသိတယ် မဟုတ်လား”
”ကဲပါဆရာလေးရယ် ကျွန်တော်ကပဲ တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆရာလေးကျွန်တော့်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလို့ မသိရမှာ လဲသိတာပေါ့ဗျာ။ ဆရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်က အလေးနက်ထားပြီးချစ်ခဲ့တာပါပဲ။ ဆရာလေးနဲ့ ရင်းနီးဖို့ ကျွန်တော့်မှာ ဘယ်လောက်ြကိုးစားခဲ့ရတယ် ထင်သလဲ။ ဆရာလေးနေတဲ့ အဆောင်ကို ရောက်အောင်ကျွန်တော့်အဖေကို မနည်းပြောယူထားရတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာလေးနဲ့ အခုလိုချစ်သူတြွေဖစ်လာအောင် ကျွန်တော်ကပဲ အားထုတ်ခဲ့တာပဲလေ။ ”
”လတ်စသတ်တော့ မင်းက ငါနေတဲ့အဆောင်ကမှလိုက်ပြီး တမင်လိုက်တက်တာကိုး။ဒါဆို မင်းငါ့ကို ချစ်နေခဲ့တာကြာပြီပေ့ါ ဟုတ်လား”
သူ့ရဲ့ အပြုံးလေးအောက်တွင်ပဲ ကျွန်တော်ကျေနပ်လို့ သွားခဲ့ပါသည်။ သူ့ဖက်က ကျွန်တော့်ကို စပြီးရင်းနီးအောင်ြကိုးစားခဲ့တာကို ကျွန်တော်မှတ်မိသေးပါသည်။ သည်လောက်ဆိုလျှင် သူကျွန်တော့်ပေါ်ထားတဲ့အချစ်တွေကို ကျွန်တော်ချွင်းချက်မရှိ ယြုံကည့်လို့ရ သွားပြီပေါ့။ ကျွန်တော့်ဖက်ကလည်း သူ့ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန် အချစ်တွေပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးသားပါပင်။ ထို့နောက်သူနှင့်ကျွန်တော်ပြန်လာခြဲ့ကသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ တစ်ခုခုကို ထင့်နေသလိုပင်။
ဒီညသူနှင့်ကျွန်တော် အတူတူအိပ်နေကြ ညအတိုင်းအိပ်ရမည် ………………………………………….။
အခန်းထဲတွင် နာရီသံလေးက တစ်ချက်ချက်ြမည်နေသည်။ ညသည်လည်း လမင်းပျိုလေးနှင့် အတူတည်ရှိနေသည်။ စာကြည့်စားပွဲေ ပ်ါတွင် စာကျက်နေသော ဇင်မင်းသူကို ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှကြည့်နေမိသည်။ သူစာကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ ကျက်နေပါသည်။ ကျွန်တော် အိုက်စပ်စပ်နိုင်လှသည်မို့ရေချိုးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ အပေါ်င်္အကျီကို ချွတ်ြပီး ရေချိုးခန်းထဲကို ၀င်လာခဲ့သည်။ ရေချိုးခန်းထဲသို့ ရောက်သော် အပြင်ဖက်မှ သီချင်းဖွင့်သံကို ကြားလာသည်။ ဇင်မင်းသူ လူလစ်သည်နှင့်စာမကျက်တော့ဘူးလား မသိပါ။ ကျွန်တော် သက်ပြင်းတစ်ချက်ပြန်ချလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်း ထဲမှပြန်ထွက်လာခသဲ့ ည်။
အိပ်ခန်းထဲသို့ ပြန်ရောက်သော် အခန်းထောင့်ရှိကတ်ဆက်နားတွင် ဇင်မင်းသူက အခွေတွေကိုရွေးကာကြည့်နေသည်။ ထို့နောက် စိတ်ြကိုက်တစ်ခွေတွေ့သော အခါစက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီးထိုင်ရာမှထလာသည်။ ထို့ နောက်ကျွန်တော့်နားမှ ဖြတ်သွားကာ ကျွန်တော်ကို ပုခုံးချင်းတိုက်သွားပြီးစေ့ထားသည့် တံခါးကိုလော့ချလိုက်သည်။
အပြင်ဖက်မှ လေတဖြူးဖြူးဝင်နေသော ပြတင်းပေါက် တွေကိုလည်း အားလုံးပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အခန်းထဲရှိ လေအေးပေးစက်ကိုအရှိန်ြမှင့်လိုက်ပြီး ကတ်ဆက် sound box ကိုလည်း အဆုးံ ထိအသြံမှင့်လိုက်သည်။ ထို့ နောက် ရီမြုဖင့်သူစိတ်ြကိုက်သီချင်းတစ်ပဒ်ုကို album ကြိုကည့်ကာ နှိပ်ထည့်လိုက်သည်။ ဘုရားဘုရားသူဘာလုပ်မလို့ ပါလိမ့်။ စာကျက်တာများလို့ ဂေါက်များဂေါက်သွားပြီလားမသိပါ။ ကတ်ဆက်ထဲမှ ဂီတသံ တွေက စတင် ထွက်ပေါ်လာသည်။ အစွမ်းကုန်မြှင့်ထားသော sound box အသံကြောင့်သီချင်းသံက ကျွန်တော့် နှလုးံ ကိုတုန်လှုပ်သွားစေပြီး ရင်ထဲကို မြူးကြွလာစေသည်။ သူဖွင့်လိုက်သည်က Akon ရဲ့ don’t matter သီချင်းလေး။
”ဇင်မင်းသူ မင်းစာကျက်ရင်း ကနေ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဖောက်သွားတာလား”
သူကျွန်တော်မေးတာကို မဖြေပဲ ကျွန်တော့်အနားသို့လျှောက်လာကာ အနောက်မှနေ၍ ကျွန်တော့်ခါးကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော် ရုတ်တရက်မို့ ဆွံ့အသွားသည်။ ထို့နောက်သူ ကျွန်တော့်ကိုသူဖက်သို့ ဆွဲလှည့်လိုက်ြပီး ကျွန်တော့်ခါးကို ကိုင်ကာ ကျန်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ပူးကိုင်လိုက်ပြီး လေထဲတွင်အနည်းငယ်မြှော က်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်အလိုက် သင့်လေး နေပေးလိုက်ကာ သူပခုံးကို ပြန်ဖက်ထားလိုက်သည်။ အခြေအနေအရ dinner စားပွဲေ တွက ကတော့မည့်စုံတွဲေ တွလို ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်တော် ရယ်ချင်စိတ်ပေါက်လာသည်။ သူကတော့ ပြုံးရုံသာပြုံးသည်။
အခန်းထဲတွင်သီချင်းသံက အပြည့်နေရာယူထားပြီး ကျွန်တော့်ရင်ကို တဒိတဒ်ိတ်ခုန်နေစေသည်။ သူကျွန်တော့်ခါးကို တင်းတင်းဖက်ကာ သူနှင့်တွဲကပ်လိုက်ပြီး သူခြေထောက်တွေစတင်လှုပ်ရှားလာသည် ။ သူရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးလာသောအခါ ကျွန်တော်နောက်ကို
နည်းနည်းဆုတ်ပေးလိုက်သည်။ သူနောက်ကိုနည်းနည်းဆုတ်သွားသော အခါကျွန်တော်ရှေ့ကိုနည်းနည်းတိုးပေးလိုက်သည်။ အပေး အယူက မျှတနေသည်။
သူ့မျက်နှာ က ကျွန်တော့်မျက်နှာ နားသို့နီးကပ်လာပြီး ဂီတ ၏တေးသွားနှင့်အတူ ကျွန်တော့်၏နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်လိုက်ြပီး သူ့အနမ်းကို အလိုက်သင့်တုန့်ပြန်လိုက်သည်။ ကဗျာဆန်သည့် လှိုင်း wave တွေထဲတွင်လွင့်မြောနေရ သည်လား။ခပ်အုပ်အုပ် တိမ်တိုက်တြွေကား ရွက်လွှင့်နေရသည်လား။ အေးမြသော ရေခဲကျောက်ဆောင်တြွေကားထဲ ရောက်နေရ သည်လား မသိသော ခံစားမှုမျိုးတွေ ကျွန်တော့်ကိုရက်ရက်စက်စက် မင်းမူနေသည်။ သူ့အနမ်းထဲတွင် နစ်ဝင်စီးမြောရင်း ဂီတ၏ တေးသွားတွေကကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို သယ်ယူပွေ့ဆောင်ကာ လောကကြီးကို ခေတ္တမျှမေ့သွားစေသည်။ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေသည် အတောင်တဖျက်ဖျက်ခတ်ကာ ဝေဟင်ဆီသို့ပြန်တက်ကုန်သည်။
သီချင်းသြံပီးဆုံးသွားသောအခါ သူကျွန်တော့်ကို ကုတင်ပေါ်သို့ လှဲချလိုက်ြပီး အပေါ်မှတက်ခွကာအငမ်းမရ နမ်းပါတော့သည်။ ကျွန်တော်သူ့ အနမ်းကို ငတ်မွတ်စွာ လိုလိုချင်ချင် လက်ခံလိုက်သည်။ သူနှင့်ကျွန်တော် အနမ်းဥယဉ်ထဲတွင် အနမ်းပန်းတွေ ဝေဆာစွာပွင့်လန်းနေကြသည်။ သူ့လက်တွေကကျွန်တော့် ခန္ဓာ ကိုယ်အနှံ့ အပြားကို ကိုင်ကာပွတ်သပ်နေသည်။ ကျွန်တော့် လက်တွေကသူ့ပုခုံးကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ထားမိသည်။ ထိုအခိုက် ကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းနှင့် နှာ ခေါင်းကြားနေရာသို့ အရည်တစ်ခုခုစီး ဆင်းလာသလို စိုစွတ်မြှုကီးကို ခံစားလာရသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို အနမ်းခွာ လိုက်ကာကုတင်ပေါ်မှခေါင်းထောင်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနားသို့ လက်ြဖင့်ပွတ်သပ်ကာကြည့်လိုက်မိသည်။
ကျွန်တော်ဇင်မင်းသူကို ကြည့်လိုက်သောအခါ သူ့နှာ ခေါင်းတွင်သွေးတွေ စီးကျနေသည်။ သူလည်းသူနှာခေါင်းကို ပြန်လည်ပွတ်သပ် လိုက်ပြီး သွေးစတွေကို မြင်ရသောအခါ မျက်လုံးပြူးနေသည်။
”သွေးတွေထွက်လာတယ် ဘာဖြစ်တာလဲ ဇင်မင်းသူ။ မင်း အဆင်ပြေရဲ့လား”
”ဟား ဟား ဟား………..နှာ ခေါင်းသွေးထွက်တာလေးကို ဆရာလေးကလဲ။ နေ့လည်ကအပူရှပ်သွားတယ်ထင်တယ်။ အခုအဲယားကွန်းက အရမ်းအေးတော ရှော့ ဖြစ်ြပီးနှာ ခေါင်းသွေးလျှံလာတာ ထင်တယ”်
ကျွန်တော်သူ့ အနားသို့သွားကာ သူ့နှာခေါင်းတွင်ပေကျံနေသည့် သွေးတွေကိုတစ်ရူးဖြင့်သုတ်ပေးလိုက်သည်။ သူကလည်းကျွန်တော့် နှုတ်ခမ်းနားတွင်ပေနေသည့် သွေးတွေကိုတစ်လှည့်ပြန်သုတ်ပေးနေသည်။ ကျွန်တော်သူ့ကို စိုးရိမ်မှုတွေဖြငြ့်ကည့်လိုက်မိသည်။
”နောက်ဆိုရင် နေပူထဲသွားမယ်ဆိုရင် ထီးလေးဘာလေးဆောင်း။ နေပူထဲကပြန်လာရင်လဲရေလေးဘာလေး ၀အောင်သောက်ဦး။ မင်းကလူနော်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျောက်တုံးများမှတ်နေလားဂရုစိုက်မှပေါ့ကွာ”
”ဘာရယ်တာလဲ အကောင်းပြောနေတာ။ ”
ကျွန်တော်သူ့ကို ရင်မောစွာ ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်နေသလိုဖြစ်နေသည်။ သူကတော့ ဘာကိုမှအလေး နက်မထားပဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သာသဘောထားပုံရသည်။ ကျွန်တော်သူ့ ကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲမိပါသည်။ သိပ်ချစ်ရတော့ လဲသိပ်ပြီး
တန်ဖိုး ထားမြတ်နိုးမိသည်က ကျွန်တော့်အပြစ်ဟုတ်မည်မထင်ပါ။ လူသားတိုင်းချစ်တတ်လာလျှင် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူအတွက် အစစအရာရာ ဂရုစိုက်တတ်တာ စိးု ရိမ်ပူပန်တတ်တာ သဘာဝပါပင်။ ကျွန်တော်တစ်ရူးစ တွင်ပေနေသည့် သွေးတစ်ချို့ကို ကြည့်လိုက်မိသည်။ ထိုသွေးစတစ်ချို့သည်ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ြကားသို့ ၀င်ရောက်မွှေနောက်မည့် ကြံကမ္မာ ဆိုး၏ လက်ပါးစေဆိုတာကို
ဒီနေ့ ဆန်းဒေးဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော် အဆောင်သို့ နေလည်မသွားပဲနေလိုက်သည်။ အိမ်တွင်အေးအေး လူလူနားမည်ဟုစိတ်ကူး လိုက်သည်။ မီးဖိုချောင်ထဲသို့ဝင်ကာ အမေသုပ်ထားသည့် လက်ဖက်သုပ်တွေကို ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်နှင့် ထိုင်စားနေရင်း ၀တ္ထု စာအုပ်တစ်ကိုဖတ်ကာဇိမ်ကျနေခဲ့သည်။ သို့ သော် ကျွန်တော့်ဇိမ်က ဘယ်လောက်မှ မကြာလိုက်ပါ အနားသို့အမေရောက်လာပြီး သူ့စက်ချုပ်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ပေးဖို့မြို့ထဲသို့ လွှတ်လေသည်။ ကျွန်တော်တစ်ချက်ညည်းညူလိုက်ြပီး အိမ်မှဆိုင်ကယ်ဖြင့်ထွက် လာခဲ့သည်။ အပြင်တွင်နေကလူကိုကျက်သွားမလားအောင့်မေ့ ရအောင်ပူပြင်းလွန်းနေသည်။ ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်ြမှင့် မောင်းနှင်လာခြဲ့ပီး အမေ့စက်ချုပ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးရန် မြို့ထဲရှိ ဂေါ်ရခါးတွေ ဖွင့်ထားသည့်စက်ချုပ်အပိုပစ္စည်းဆိုင်သုိ့ ရောက်လာခဲ့သည်။
စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးထားသည်က ”ခြောက်လက်မ ရိုးရိုးဇစ် နှစ်ချောင်း (အနီ)၊ အထက်ဆင် ငါးခု(ရွှေမိတံဆိပ်) ၁၆ လက်မဇစ်ပြောက် တစ်ချောင်း၊ ဒေါင်းတံဆိပ် အပ်ချည်၂ လံုး ( ပန်းရောင်နှင့် ခရမ်း) သမီးမိုက် ပိတ်စ၈ ကိုက်၊ ရိုက်ြကယ်သီး တစ်ဗူး၊ ကော်တစ်ထုတ်၊ ဒါးစက်အပ် သုံးချောင်း ”
ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သည်ပစ္စည်းတွေအားလံုး ကျွန်တော်စိတ်နှင့်မှတ်သွားရမည်ဆိုပါကလမ်းတစ်ဝက်တွင်မေ့နေလောက်ရော့မည်။ ထို့ကြောင့်အမေက ကျွန်တော့်ကို ပစ္စည်းဝယ်ခိုင်းလျှင်ယခုလို စာဖြင့်ရေးပေးနေကျဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်တွင်အမေ့လွယ်တတ်သည့် အကျင့်တစ်ခုနှင့်အပြင်သွားလျှင် ပိုက်စံထဲ့မသွားတတ်သည့် အကျင့်တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အမေကကျွန်တောက့်ိုပြောသည် လမ်း သွားရင်ပိုက်ဆံလေးဘာလေးထည့်သွားဦးတဲ့ တြော်ကာ ဆင်တစ်ကောင်ကိုတစ်ရာနဲ့ရောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် မ၀ယ်နိုင်ပဲနေဦးမယ်တဲ့။
ဆိုင်ကယ်ကို စက်သတ်လိုက်ကာ ဇက်သော့ခတ်လိုက်ပြီး စတိုးဆိုင်ထဲသို့ ကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယြူပီးအထုတ်ဖြင့်ထည့်ကာ ဆိုင်ထဲမြှပန်ထွက်လာခဲ့သည်။ နေကတော်တော်ပူနေသဖြင့် အိမ်မပြန်ခင် အအေးလေးတစ်ခွက်လောက် အမေ့အတွက်ဝယ်သွားဦးမည်ဟုတွေးကာ အအေးဆိုင်ရှိသည့်ဖက်ကို ပြန်လျှေက် လာခဲ့သည်။ အအေးဆိုင်ရှေ့သို့ ရောက်သောအခါဆိုင၏် မှန်တံခါးကို တွန်းပြီးအထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။ သည်ဆိုင်ကထောပတ်သီး ဖျော်ရည်ကတော်တော်ကောင်းသည်။ အမေ့အတွက်ကျွန်တော် သည်ဆိုင်ကပဲဝယ်ပေးနေကျဖြစ်သည်။ဆိုင်ထဲသို့ရောက်သောအခါ ကောင်တာရှိရာသို့သွားပြီး လိုချင်တာတွေကို မှာ လိုက်သည်။ခဏကြာတော့ ကောင်တာရှိကောင်လေးက ကျွန်တော်မှာ ထားတာ တွေကို ပါဆယ်ထုတ်ပြီးပေးသည်။ ကျွန်တော်ကျသင့်ငွေကို ရှင်ပေးလိုက်ပြီး ဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်မည်အပြု ဆိုင်ထောင့်တွင် ထိုင်နေသော
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် တိုးညှင်းစွာရေရွတ်လိုက်ြပီး ဇင်မင်း သူရှိရာသို့ လျှောက်သွားရန်ပြင်လိုက်စဉ် သူ့ဘေးနားမှ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကိုပါ မြင်လိုက်ရသဖြင့်ခြေလှမ်းတွေရပ်တန့်သွားသည်။ကျွန်တြော်ကည့်နေတုန်းမှာ ပင် ဇင်မင်းသူကို ထိုကောင်မလေးက ရေခဲမုန့်ခွံ့ကျွေးနေသည်။ဇင်မင်းသူက ထိုကောင်မလေးခွင့်ကျွေးသော ရေခဲမုန့်ကို ပါးစပ်ဟပေးလိုက်သည်။ ထိုကောင်မလေးက
ရေခဲမုန့်ခွံ့ပြီးသွားသောအခါ သူ့ပါးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်လေသည်။
ကျွန်တော့်လက်ထဲမှ အထုတ်တစ်ချို့ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသွားရသည်.....။
Written by LoveAlone
Re-Edited by Alex Aung
ကြာတယ်ဗျာ။ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတာပဲ။ မြန်မြန်ဆက်တင်ပေးပါဗျာ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလည်းရေးပေးပါနော်
Wow! Its really romantic arts ofacomplete and complex feeling of our homo's love. Just keep going on Alex.
Thans A ton... Sue Sha...
thurein tun said...